डा. केसीले अनशन तोडे- समाचार - कान्तिपुर समाचार
डडेलधुरा — ९ दिनदेखि डडेलधुरामा अनशरत डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । पछिल्लो समय देशमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण केही दिनका लागि अनशन स्थगित गरेको उनले बताएका छन् ।
‘सिमा मिचिएको विद्यमान अवस्थालाइ हृदयगंम गरि तत्कालका लागि सत्याग्रह स्थगन गरेका छौं’ डा गोविन्द केसीले सञ्चारमाध्यसँग कुरा गर्दै भने, ‘राष्ट्रियताका विषयमा देशभरी आवाज उठिरहेको विषयलाइ हृदयगंम गरि सत्याग्रह स्थगन गरेको हुँ’।
अनशन स्थगन गरेपछि डा केसीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा सीमा रक्षाका सवालमा राजनीतिक शक्तिहरुले देखाएको तदारुकता देखावटी मात्र नभएर कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधानतर्फ लाग्न आग्रह गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनसहितका सातबुँदे माग अघि सारेर डा. गोविन्द केसीले कात्तिक १७ गते डडेलधुरामा अनशन बस्न गएका थिए ।
१५ औं अनशनका क्रममा ०७५ साउन १० मा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले पटकपटक सत्याग्रहसहितको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । इलाममा बसेको १६ औं अनशन बीचमै तोडेका उनका धेरैजसो माग त्यति बेलाकै छन् ।
१७ औं अनसनको नवौं दिनमा डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका हुन् । मंगलबार बिहान उनले थप उपचार गर्न अस्वीकार गरेका थिए । अनशनको नवौं दिनमा आइपुग्दा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थामा अत्यन्तै नाजुक भएको उनको रेखदखमा संलग्न डा. तोसिमा कार्कीले बताइन्।
हिजो सोमबार डा. केसीलाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लानका लागि आएको सेनाको हेलिकोप्टर रित्तै फर्किएको थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १६:५३
काठमाडौँ — ९ दिनदेखि अनशरत डा. गोविन्द केसीको जायज माग सम्बोधन गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल वार्ता टोली गठन गरेर जायज माग सम्बोधन गर्नु सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै, उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समस्या समाधान गर्न सरकार असफल भएको बताए ।
समस्याको विवेकसम्मत हल खोज्न र विद्यार्थीलाई तनावमुक्त वातावरणमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउन तत्काल प्रभावकारी पहलकदमी गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
यस्तै, कांग्रेसले महाकाली नदी पूर्वका सबै भू-भाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ १६:४६